Mpizara Minecraft Vaovao an-tserasera !!! | Avy amin'ny Linux
Mpizara Minecraft Vaovao an-tserasera !!!
ratakill | | Games
Salama daholo, nanangana mpizara Minecraft tato ho ato aho mba hahafahan'ny olona rehetra te hiditra sy hiala voly. Ny mpizara dia namboarina hiatrehana mpampiasa Internet 100 amin'ny fotoana iray, koa mieritreritra aho fa ampy ho an'ny fiarahamonina Desdelinux izany, raha tianao ny hametrahako karazana mpizara hafa ho an'ny lalao toa ny WoW, Start Craft, sns, ampahafantaro ahy, arahaba daholo.
Server: webpagetest.no-ip.org - 174.61.26.252 (seranana default)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Games » Mpizara Minecraft Vaovao an-tserasera !!!
47 hevitra, avelao ny anao
Juanjo Salvador dia hoy izy:
Ny serivisy World of Warcraft, ankoatry ny hafa, dia tsy ara-dalàna. Inona avy ireo toetra mampiavaka ny milina izay nitaingenanao azy? Manantena aho fa lavanila, tsy ara-dalàna koa ny mpizara Bukkit ankehitriny; )
Valiny tamin'i Juanjo Salvador
ratakill dia hoy izy:
micro: amd A10 (2x)
kapila mafy 1 tb
Mamaly an'i ratakill
Alonso dia hoy izy:
Ireo mpizara Bukkit dia tsy ara-dalàna, mankanesa any http://www.spigotmc.org/threads/bukkit-craftbukkit-spigot-1-8.36598/.
Zavatra faharoa, tsy hoe hamaly anao fotsiny, fa ho an'ny ratakill: Azonao atao ve ny mametraka ny plugin Residence? Na dia lazaiko aza fa ho an'ny 1.6.4 dia lainga io, mbola mandeha ihany.
Raha manana olana ianao dia azonao atao ny milaza amiko, satria manana mpizara aho, raha misy olona liana dia:
IP: mc.estudia2.com - 5.9.154.155
Valio i Alonso
mrfenix49 dia hoy izy:
Ny mpizara lavanila dia fototra loatra. Tsy azo atao izany. Bukkit sy spigot dia tsy ara-dalàna, nametraka rafitra vaovao izy ireo hisorohana ny fanaparitahana kaody wolvereness. Ankehitriny dia tsy maintsy manangona ny volantsika manokana isika
Mamaly an'i mrfenix49
Jorgicio dia hoy izy:
Tsara. Inona avy ireo toetra mampiavaka azy? Handeha aho hanome azy io 😀
Mamaly an'i Jorgicio
Tsy afaka miditra aho. Ity dia milaza amiko ny fivoriana tsy mety D:
Tsy haiko hoe maninona no tsy avelany hiditra ianao, ny serivera dia mifandray 24/7 ary tena mandaitra izy, nanandrana nifandray tamin'ny toerana samihafa tamin'ny mpampiasa samihafa aho ary tonga lafatra. Hamarino raha tena izy ny minecraft anao fa tsy fiarahabana kinova piraty
Angamba izany no izy, Mineshafter no ampiasaiko satria lafo be ny Minecraft Premium. Ankasitrahana fa afaka manamboatra an'io ianao 😀
Daniel PZ dia hoy izy:
Ny valiny avy amin'ilay mpiara-miasa aminao handraisana ilay hafatra hoe "session tsy mety" dia satria ny mpizara minecraft izay nitaingenan'ny mpiara-miasa iray hafa dia tsy manaiky minecraft vaky, izany hoe tsy maintsy manana izany ianao na raha premium, fa ampy ho an'ny admin ny mametraka ny safidy " online-mode = diso «ao anatin'ny rakitra server.properties mba hahafahan'ny tsirairay miditra, premium na tsia.
Misaotra ny mpizara, hifandray tsy ho ela aho, fa manome endrika bebe kokoa, FORGE ve? na CraftBukki ?. sa amin'ny fomba famoronana?
Valiny tamin'i Daniel PZ
Afaka miditra aho izao. Voucher!
Mandrapihaona any 🙂
Mila Premium ianao raha te hiditra. Raha misy ianao dia avereno ny lalao 🙂
arkhan dia hoy izy:
Ary maninona no aleo tsy manangana mpizara faran'izay kely ...?
Mamaly an'i arkhan
Tena tsy dia tiako loatra ny kely indrindra, hitako ny kely indrindra rehefa milaza fitsapana ilay anarana
Derp dia hoy izy:
Ny Minecraft dia toa lafo tokoa tamin'izay, ka tsy nividy aho ary tsy hividy azy raha tsy midina kely e__é
Valiny tamin'i Derp
Demelphy dia hoy izy:
Minecraft dia mety ho toa lafo vidy aminao, fa ny fandoavana € 20 mandritra ny ora an'arivony maro azonao atokana, amin'ny lavanila na amin'ny mods, irery na ao anaty vondrona, heveriko fa vidiny mihoatra ny antonony. Raha misy olona mandoa € 8 tapakila sarimihetsika hampiala voly ny tenany mandritra ny 2 ora…, miaraka amin'ny tapakila roa mahery, dia mandoa ny lalao xD ianao
Fantatro fa tsy mora ny mahazo vola, fa raha mitsitsy ianao dia tsy tokony ho sarotra be izany. Mazava ho azy, raha tena tianao izany dia hiafara amin'ny fividianana azy, raha milalao fotsiny ianao satria lalao lamaody dia ara-dalàna raha tsy te-handoa ny vidiny ianao.
Valiny ho an'i Demelphy
Manomboka ny Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) amin'ny 2014-12-30 18:31 CST
Nmap scan report ho an'ny c-174-61-26-252.hsd1.fl.comcast.net (174.61.26.252)
Miakatra ny mpampiantrano (latabatra 0.075s).
Tsy aseho: seranana 995 voasivana
SERVICE an'ny fanjakana PORT
21 / tcp nakatona ftp
22 / tcp misokatra ssh
80 / tcp misokatra http
3306 / tcp misokatra ny MySQL
9091 / tcp misokatra xmltec-xmlmail
Vita ny Nmap: Adiresy IP 1 (mpampiantrano 1) notarafina tao anatin'ny 7.38 segondra
Ho toy ny tolo-kevitra momba ny fiarovana, seranan-tsofina 21 sy 22, dia mampidi-doza tokoa ny fampiasana ilay
misaotra tamin'ny torohevitra tratry ny taona vaovao
Miala tsiny amin'ny antsipiriany fa izay manana kaonty premium ihany no afaka miditra, efa raikitra io. Mikasika ireo toetra mampiavaka azy dia ity ny 1.8.1 farany, misy azy amin'ny maody velona, ​​ary tsy manana fonosana na plugin io intsony. Raha te hampiditra zavatra aho dia ampahafantaro fotsiny ahy, ny mahaliana ahy dia ny mankafy ny mpizara izay amin'ny farany dia ny fiarahabana anao ...... misy tolo-kevitra fantatrao, tratry ny taona.
Asio plugins namana (miaraka amin'ny bukki), ny voalohany sy tena ilaina dia ny "clain" satria raha tsy izany, misy afaka miditra ao an-tranon'olona hafa ary mangalatra ny fitaovany rehetra, faharoa, mametraka fiarovana ao anaty tratra sy lafaoro, mangalatra akoho nendasina 2 fotsiny aho izay lasa tao anaty lafaoro izy ireo :), noana aho ary efa ho faty: v .. fahatelo ... rehefa miditra amin'ny mpizara ianao dia tsy maintsy misoratra anarana amin'ny mpampiasa sy teny miafina, ka tsy hisy hiditra miaraka amin'ilay mpampiasa mitovy aminy ary ho very ny entanao ary / na ambaratonga, ary farany, ny an'ny TP ka TEPEE ny olona avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa, mandefa na mandray TP, izay tena ilaina tokoa, ny TP dia miaraka amin'ny bukki tenany ihany, fa ny hafa kosa tokony ampianao eny na eny, NAOTY, Tsy ilaina ho an'ny mpampiasa ny manana ny plugin ao amin'ny minecrafts, satria tsy voatery ho toy ny forge.
Ireo no plugins tena ilaina rehetra tokony ampianao.
Misaotra amin'ny torohevitra fa tsy hanampy afa-tsy ilay hiditra aho, tiako ho toy izao izao tontolo izao, mangalatra, mamono olona, ​​manao zavatra ratsy sy tsara ary tsy hitako loatra ny lojika hisakanana anao hangalatra sy hanao zavatra mety tena hatao, Raha misy angalarina aminao dia mamono ilay olona nangalatra azy na mangalatra azy ianao, andao, amin'ny tontolo tena izy fa tsy romotra ny zava-drehetra ka andao hametraka hafanam-po kely amin'ity mpizara ity, arahaba ary indray, tratry ny taona.
Francisco dia hoy izy:
Huy, uyuyuyuyuyuyyy, ity dia teny lehibe sahady ry tompokolahy, vondrom-piarahamonina misy Linux? Avelao ny fitondrana divay, afaka nanao ny vanila, BC, Lich ary Cata aho. Tsy misy mihitsy ny kinova panda. Tsy haiko raha mampiseho an'izay lalao tiako ilay xDDDDDDDDDD, izay raha PVE azafady.
Valiny tamin'i Francisco
Yomes dia hoy izy:
Satria nanova azy ianao tamin'ny 1.8.1 ka hatramin'ny 1.7.9 dia tsy namela ahy hiditra izy. Voalaza ao fa "Tsy mety ny fivoriana". ó_ò
Mamaly an'i Yomes
Izao dia milaza amiko izy fa "Tsy mandeha ho azy ny fanamarinana ho an'ny fikojakojana."
Tsy navelany hiditra koa aho, mitovy ny hafatra azony tamin'ilay mpiara-miasa amiko etsy ambony ...: /
Vonona ny zava-drehetra, nanao fidinana farany aho hanao fitsapana vitsivitsy fa eto izahay dia efa miaraka amin'ny fiarahabana miasa farany ...
joaco dia hoy izy:
Mamaly an'i joaco
Miala tsiny amin'ny fanelingelenana rehetra, vonona ny mpizara miaraka amina plugins rehetra ary miasa tanteraka izy aorian'ny fitsapana adiny vitsivitsy, azonao atao ny miditra amin'ny kinova 1.8 sy 1.8.1. Ankafizo, amin'ny alàlan'ny fomba ahafahanao mampifandray mpanjifa 100 amin'ny fotoana iray, tsara manantena aho fa indray andro any dia ho tonga amin'io isa io isika, miarahaba ary indray taona vaovao faly!
Raha sahy mamorona iray amin'ny Counter Strike na Counter Strike ianao: loharano Izaho ihany no nandefa tutorial momba ny fomba fanangonana iray 😀
les dia hoy izy:
Team Fortress 2 !!!.
Mamaly an'i Dese
ok miasa aho mifototra amin'izany
JCM dia hoy izy:
Ny mpizara amin'ny farany, tiako ny vokany.
Valiny ho an'i JCM
Tamin'ny farany dia tena tsara ny nikasaiko hanao azy. Hevitra marina io.
misaotra ary ankafizo, arahaba
Nahafinaritra ahy ny tatoandro, saingy tsy misy fifehezana ireo troll ary lasa mangidy aho. Heveriko fa aleoko ivelan'ny serasera ...
Hala, vita izany. Nomeko an'i Coriano ny fananako rehetra, mba tsy ho very izy ireo. Ratsy loatra ho an'ny troll, raha tsy izany dia niara-nifaly taminareo rehetra aho.
Salama ratakill. Ny olona sasany (jacoboiglesias3 sy olona iray hafa) dia nanimba izao tontolo izao: naka loharano tamin'ny tranonay, nandrava tranom-panjakana izy ireo. Ireo voakasik'izany dia saika ny mpizara rehetra. Miezaka aho fa azonao sakanana izy ireo ary tsy afaka miditra mihitsy izy ireo. Tamim-pahatsorana, JCM.
Salama JCM Tsy te handray fepetra henjana amin'ny mpizara minecraft aho, izany hoe ny tsy fanakanana azy sy famerana izany dia tsy nametraka fiarovana firy aho fa hanao fanavaozana mba hahafahan'ny mpampiasa tsirairay miaro ny faritra misy azy ireo ary tsy misy olona afa-tsy izy. te hiditra ny tranonao ianao, handrava sns. mahafaly
Ary rahoviana ianao no hanao izany?
Salama daholo, ny mpizara dia efa vonona ny zavatra rehetra ka tsy afaka manimba ny fanananao ianao, ny plugin dia antsoina hoe fonenana, karohy amin'ny Internet ny fomba hanamarihana ny fonenanao, ity misy rohy mankany amin'ny mpitari-dalana ny fampiasana azy:
(amin'ny teny anglisy)
Albertt78 dia hoy izy:
Misaotra anao manohy manatsara ny mpizara! Androany aho niditra ary tsy afaka nanao na inona na inona, ny zavatra rehetra dia voasakana afa-tsy ny tratrako.
Mamaly an'i Albertt78
Nomasvirus dia hoy izy:
Mazava fa. Aleoko ilay Offline.
Valio ny Nomasvirus
KeyMerVin dia hoy izy:
MISAOTRA BE NAMANA NAMANA ^^
Raha vantany vao manana ilay PC Gamer izay kasaiko hividianana milalao GamePlays amin'ny PC aho ary tsy avy amin'ny PS4 fotsiny dia hiditra ny mpizara anao ^^ (ilay solosaina finday niaretako he)
Mazava ho azy, satria ny Linux, izay nanararaotra nanandrana ny Minecraft tamin'ny Linux, ary toy ireo lalao hafa, dia mandeha tsara kokoa izy io, na dia ao amin'ny Gamer PC izay kasaiko hividy aza dia tsy ho hitako ny maha samy hafa azy amin'ny iray izay ara-drariny, saingy aleoko ny Linux, dia Mahita tontolo milamina kokoa noho ny lalao aho, toy ny hoe "tsy dia lanja", tsy haiko ny manazava azy xD
Valio amin'i KeyMerVin
pol lopez ruiz dia hoy izy:
Te hanandrana aho !!!! Tiako foana ny hamorona mpizara amin'ny minecraft.
Izaho dia mpialamboly amin'ny minecraft.
Mamaly an'i pol lopez ruiz
Steve dia hoy izy:
fanontaniana miasa ve ny mpizara?
Amin'ny firy izy no mihidy? Amin'ny firy no misokatra?
Mamaly an'i steve
xnmm dia hoy izy:
hey manana olana te-hifandray aho, holazaiko amiko fa nolavina ny fifandraisana,
Fa maninona no miseho izany?
Valiny amin'ny xnmm
iray amin'ireo lalao tsara indrindra hitako
Gentoo. Ny marina ao ambadiky ny angano
Mamorona vondrona mpampiasa ao amin'ny Gmail